PSJTV | आज ‘इद उल फित्र: किन मनाइन्छ इद ?
आज ‘इद उल फित्र: किन मनाइन्छ इद ?
काठमाडौं: सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पर्व ‘इद उल फित्र’को अवसरमा बुधबार (आज) सार्वजनिक बिदा दिएको छ । एक महिने रमजान पर्व समापन भएको अवसरमा आज मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी इद उल फित्र पर्व मनाउँदै छन् । यो पर्व मनाएपछि रमजानको एक महिने व्रत सकिन्छ । इदको मुख्य अर्थ नै खुशी मनाउनु हो ।
विशेष नमाज पाठ गरेपछि तीन दिनसम्म आफूभन्दा ठूलाबडाकहाँ गएर आशीर्वाद तथा आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने गरिन्छ । आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवइ, खजुरलगायत मीठा खानेकुरा खान दिने चलन छ । खुशीपूर्वक गरीबलाई दान गरिने भएकाले सो पर्वलाई इद उल फित्र भनिएको हो ।
इदको दिन नमाज पढेर उनीहरुले भगवान अर्थात अल्लाहलाई धन्यबाद दिन्छन् र कुशल मंगल रहनु भनेर प्रार्थना गर्छन् । यो दिन उनीहरु थरी-थरीका स्वादिष्ट परिकार बनाउँछन्, नयाँ कपडा लगाउँछन् र नमाज पढ्न मस्जिद जाने गर्छन् । साथमा एकअर्कोलाई अंगालो हारेर इदको शुभकामना दिन्छन् । आफ्नो हैसियत अनुसार यस दिन उनीहरुले असाहाय, गरीबहरुलाई दान दिनुपर्ने हरेक मुस्लिमहरुको कर्तव्य नै हुन्र्छ ।
किन मनाईन्छ इद ?
अरबी पात्रो हिजरी सम्बत अनुसार इद वर्षको दुई पटक मनाइन्छ । विभिन्न भनाई अनुसार, पैगम्बर हजरत मुहम्मदले बद्रको युद्धमा शानदार विजय हासिल गरेका थिए । यस युद्धलाई जितेको खुसीमा नै मुस्लिम समुदायहरुले इद मनाउन सुरु गरेका हुन् । ई।स। ६२४ मा पहिलो पटक इद उल फित्र मनाईएको थियो । यस पर्वलाई मुस्लिमहरुले निकै श्रदापूर्वक मनाउने गर्छन् ।